सरकारले जारी गर्‍यो श्वेतपत्र, नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति क- कसले प्रयोग गरे ? हेर्नुस श्वेतपत्रको पूर्ण विवरण | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति १३ फाल्गुन २०७६, मंगलवार १६:२९ लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । सरकारले नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति विवरण श्वेतपत्रमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । ट्रष्टका अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् ।
नेपाल ट्रष्टको नाममा देशभर करिब २२ हजार रोपनी जग्गा रहेको छ । सोमध्ये १५ हजार रोपनी त जंगलमात्रै छ । त्यस्तै काठमाडौंका केही महँगा ठाउँको जग्गा बिभिन्न कम्पनीले लिजमा प्रयोग गरेको पाइएको छ ।
तत्कालिन राजा वीरेन्द्रको परिवारका नाममा रहेको २१ हजार ५६२ रोपनी जग्गा नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा आएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । सो मध्ये सबैभन्दा बढी ४ हजार ४४२ रोपनी जग्गा काठमाडौं जिल्लामा मात्रै भेटिएको छ ।
दरबारमार्ग,लाजिम्पाट,कमलादी,कालिमाटी,ताहाचल,छाउनी जस्ता महँगा ठाउँका जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा लिज र भाडामा दिइएका छन् । नेपाल ट्रष्टको घरजग्गा प्रयोग गर्नेमा थामसेर्कु ट्रेकिङ,टाउन डेभलपर्स,कन्सेप्ट डेभलपर्स, स्टाण्डर्ड चार्डर्ड बैंक लगायतका निजी कम्पनीहरु छन् ।
काठमाडौंका काँठ क्षेत्रमा रहेका घरजग्गा भने मोहीले बसोबास र खेती प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ भने ताहाचलमा बिभिन्न सरकारी कार्यालयहरुले न्युनतम भाडा तिरेर बसेका छन् । यी अधिकांश सम्पत्ति २०५० सालमा र केही २०५३ सालमा लिजमा दिइएका हुन् ।
२०६४ सालमा नेपाल ट्रष्ट बनेपछि ती सम्पत्ति राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारका नामबाट ट्रष्टमा ल्याइएको थियो । त्यसपछि धेरैजसो काठमाडौंका महँगा ठाउँका जग्गाको पुनः लिज सम्झौता २०६६ पुस र माघमा मन्त्रिपरिषदबाट गराइएको पाइएको छ ।
ट्रष्टमा तत्कालिन राजपरिवारको नामबाट आएको रकम अमेरिकी डलर एक लाख ४८ हजार ५८१ र ब्रिटिस पाउन्ड स्टर्लिङ ५० हजार १२४ खातामा रहेको पाइएको छ । ट्रष्टले विभिन्न बैंक तथा बित्तिय संस्थाको शेयर समेत खरिद गरेको छ ।
काठमाडौं सहित भक्तपुर, ललितपुर, नुवाकोट, मकनवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक , धनकुटा, सुर्खेत, कास्की, चितवन र धादिङमा तत्कालिन राजपरिवारको जग्गा जमिन पाइएको छ । रामेछाप दोलखा लगायतका जिल्लामा जमिन खोज्ने क्रम चलिरहेको छ ।
प्रहरीको गोली लागी एक जनाको मृत्यु
काठमाडौैं । कपिलवस्तुमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
लक्ष्मीपूजाको मूर्ति विसर्जनका क्रममा सुरु भएको विवादले…
बंगलादेशका राष्ट्रपति आज चन्द्रागिरि र पाटन घुमेर स्वदेश फर्किंदै
काठमाडौं । बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिद चारदिने नेपाल भ्रमण पूरा गरी शुक्रबार स्वदेश फर्किँदैछन् । स्वदेश फर्किनुअघि उनले…
जुवा खेल्नेहरु पक्राउ, खेलाउनेसँग प्रहरीको सेटिङ
काठमाडौं । दशैंको मुखमा मूलपानीको एक जुवाखालमा छापा हान्ने क्रममा असावधानी अपनाउँदा दुई जुवाडेको मृत्यु भयो । बाँकी जुवाडेलाई…
सत्तारुढ दलकै विद्यार्थीहरुले किन दले क्याम्पसका प्रमुखलाई कालोमोसो
जनकपुरधाम । प्रदेश नम्बर दुईको सत्तारुढ दल राजपा नेपालका विद्यार्थीहरुले जनकपुरस्थित रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख बिजयलाल दासलाई कालोमोसो…
वीरको निर्माणाधीन भवनको लिफ्ट चुडिँदा दुई जनाको मृत्यु
काठमाडौं । वीर अस्पतालको निर्माणाधीन भवनको लिफ्ट चुडिँदा दुईजना कामदारको मृत्यु भएको छ भने एक जना गम्भीर घाइते छन्…
केही दिनमै कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या १० लाख पुग्ने डब्लूएचओको चेतावनी
मलेसिया एयर नेदरल्यान्डका नागरिक बोकेर उड्यो
टेकुमा उपचाररत दुई जनाको दोस्रो रिपोर्ट पनि पोजेटिभ
दिल्लीको धार्मिक सभामा गएको आशंकामा ११ जना क्वारेन्टाइनमा
कोरोनाभाइरसको महामारीबीच जलवायु सम्मेलन यो वर्ष आयोजना नहुने
२० चैत्र २०७६ बिहिवार को राशिफल
ओम्त्नी समूहले राखेको पाँच करोड धरौटी जफत , ठेक्का दिनेलाई के हुन्छ ?
विवादास्पद स्वास्थ्य उपकरण खरिद सम्झौता रद्द
प्रकरणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति, ‘हल्लाको पछाडि नलागौंँ’(विज्ञप्ति सहित)
यसरी लिन्छन अस्पतालले विरामीको ज्यान ? विरामी घुमाउदा घुमाउर्दै जान्छ ज्यान ?
टेकुमा उपचाररत दुई जनाको दोस्रो रिपोर्ट पनि पोजेटिभ 37 views
अमेरिकामा एकैदिन ९ सय बढीको मृत्यु, संक्रमितको संख्या २ लाख नाघ्यो 29 views
बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्ति प्रहरी हिरासतमा नै मृत 25 views
काठमाडौं क्षेत्र नं १ का प्रदेश सभा सदस्य दिपेन्द्र श्रेष्ठको भिडियो सर्वाजनिक, काठमाडौंका जनताले खानेपानी पाएन ? 19 views
म बिस्तारै उहाँको शरीरमा घोडा चढे…. (यौन कथा) 18 views
अब एसईई विद्यार्थीका लागि नयाँ सुविधा 14 views
‘खानेपानी सहज वितरणको लागि भिडियो बैठक’ 14 views
वाण्ज्यि विभागमा दर्ता नै नभएको कम्पनीबाट कोरोना ‘र्‍यापिड टेस्टिङ किट’ टेण्डरको खुलासा 11 views